Wararka Maanta: Khamiis, Oct 15, 2013-MADAXWEYNE XASAN SHEEKH: “Waa nalagu soo War-geliyay Weerarkii Mareykanku uu ku qaaday Degmada Baraawe”
Wararka Maanta- Khamiis, Oct 15, 2013
Xasan Sheekh ayaa xusay in weerarkaas uu ka mid yahay iskaashiga ay ka leeyihiin Soomaaliya iyo caalamka dagaalka lagula jiro Al-shabaab, isagoo intaas raaciyay in iyaga iyo dowladda Mareykanka ay si dhow ula socdaan isbedellada ka dhacaya goobaha ay Al-shabaab ka taliso.
“Weerarka Baraawe waa nalala socodsiiyay. Wixii dhacayna waa kuwo aan ku faraxsannahay,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya oo mar kale yiri: “Al-shabaab waa koox dhibaato ku haysa Soomaaliya iyo calaamka, waana lala dagaalamayaa.”
Ciidamada Mareykanka ayaa horraantii bishan weerar ku qaaday degmada Baraawe oo saldhig weyn ay ku leedahay kooxdan, iyagoo beegsaday guri ku yaalla xeebta degmadaas oo ay ku sugnaayeen saraakiil Al-shabaab ka inkastoo lagu guuldarreystay in weerarkaas laga gaaro hadafkii laga lahaa.
Xukuumadda Washington ayaa sheegtay in weerarkaas ay ku beegsanayeen sarkaal lagu magacaabo C/qaadir Maxamed C/qaadir oo ka tirsan ururka Al-shabaab, inkastoo uu sarkaalkaas baxsaday.
“Innaga iyo Mareykanka waan ku heshiinnay howgallada noocan oo kale ah,” ayuu madaxweyne Xasan mar kale yiri. Isagoo xusay in dowladda Somalia ay ku faraxsan tahay in lagu weeraro Al-shabaab meel walba oo ay dalka kaga sugan yihiin.
Siyaasiyiinta reer galbeedka ayaa rumeysan in qorshaha lagu kordhinayo tirada ciidamada AMISOM ay tahay sidii lagu weerari lahaa degmada Baraawe oo ah saldhigga ugu weyn ee Al-shabaab ay ku leedahay Koonfurta Soomaaliya.
“Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax aan suuro-gal ahayn ku tilmaamay in Al-shabaab ay dib isku abaabulayso, isagoo soo dhaweeyay qorshaha ay ku beegsanayaan dalalka caalamka Al-shabaab. Isgaoo yiri: “Al-shabaab six un ayay waxyeello u gaartay. Qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha dalka waa kuwo ay ugu muujinayaan taageerayaashooda inaysan weli dhiman.”
Dhanka kale, madaxweynuhu wuxuu sheegay in weerarrada milateri ee lala beegsanayo Al-shabaab ay yihiin kuwo muhiim ah, balse loo baahan yahay inay noqdaan kuwo laga gaaro hadafka laga leeyahay. Isagoo ku baaqay in caalamku uu gacan ka siiyo dowladdiisa sidii ay ciidamadeeda dib ugu dhisi lahayd markaasoo uu sheegay in Al-shabaab laga adkaan karo.
“Beesha caalamku waxay doonayaan inay Al-shabaab ku ugaarsadaan dalka Soomaaliya gudihisa, balse taasi ma ahan mid suurogal ah. Arrinta keliya ee looga adkaan karo waa in dib loo dhiso ciidamada dowladda Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Ugu dambeyn, madaxweynuhu wuxuu sheegay in Al-shabaab oo si wadajir ah loola dagaalamo lagana xiro xuduudaha ay tahay fikrad kale oo lagu soo af-jari karo, isagoo sheegay inuu rajeynayo in Al-shabaab la burburin doono xilli dhow.